laacib » Macalinkii badali lahaa Antonio Conte oo durba ogolaaday inuu talada Stamford Bridge la wareego – waana macalin laba jeer tiigsaday finalka UCL.
Macalinkii badali lahaa Antonio Conte oo durba ogolaaday inuu talada Stamford Bridge la wareego – waana macalin laba jeer tiigsaday finalka UCL.
Chelsea ayaa durba heshay macalinkii badali lahaa Antonio Conte marka uu dhamaado xilli ciyaareedkaan sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya gudaha dalka talyaaniga, waana macalin laba jeer tiigsaday finalka Champions League.
Massimiliano Allegri ayaa ogolaaday inuu noqdo badalka Antonio Conte, sidoo kalana la wareego talada garoonka Stamford Bridge, waxeyna arintaan imaaneysaa xilli lixdii bilood ee lasoo dhaafay shaki weyn la galinayay mustaqbalka macalinka reer talyaani ee laacibkii difaacaneysa Premier League.
Corriere dello Sport ayaa shaaca ka qaaday in tiro badan oo macalimiin ah lala xiriirinayo Chelsea si ay badal ugu noqdaan Antonio Conte, balse markaan waxey doorteen Max Allegri kaas oo 2015 iyo 2017 la tiigsaday Bianconerri koobka horyaalada yurub ee Champions League balse guuldaro kala kulmay Barcelona & Real Madrid.
Warbixinta waxey sheegeysaa in 50-jirkaan uu heshiis hordhac ah la galay Blues, balse laacibkii Turin ka dhisan ayaa diyaarineysa qorshe ay kaga hor istaageyso Allegri inuu isaga guuro laacibkii ilaa uu ka dhameysto heshiiskiisa dhamaanaya 2020.
Allegri wuxuu leyliyay Bianconerri 195-kulan tan iyo markii uu July 2014 xilka kala wareegay Antonio Conte, 137-ka mid ah guulo ayuu gaaray, wuxuuna u sahlay laacibkii iney hanato sadex jeer oo xiriir ah Scudetto.